Ny kamiao elektrika Yunlong miaraka amin'ny fankatoavana EEC L7e dia natao manokana ho an'ny fampiharana rehetra izay laharam-pahamehana ny fahamendrehana, ny kalitaon'ny famokarana ary ny famolavolana miasa.Ity fiara mitondra herinaratra ity dia vokatry ny traikefa an-taonany sy andrana amin'ity sehatra ity.
Fametrahana:Ho an'ny logistika ara-barotra, ny fitateram-bahoaka ary ny fitaterana entana maivana ary koa ny fandefasana kilaometatra farany.
Fepetra fandoavam-bola:T/T na L/C
Fonosana & Loading:4 Units ho an'ny 1 * 40HQ.
Yunlong EEC L2e electric tricycle-J3 dia tricycle elektrika rehetra afaka mitondra olona 2-3, mamaly tsara ny filan'ny fianakaviana hivoaka.Manana endrika tsara tarehy, fampisehoana tsara ary fiarovana avo.Afaka mandeha 70-80 kilometatra indray mandeha izy io, ary 35km/ora ny hafainganam-pandeha ambony indrindra.
Fametrahana:Toa fiara kely izy io nefa manana kabine avo lenta, azo antoka ary misy rivotra, ny sehatra tsy manam-paharoa dia mamela ity fiara ity hialana amin'ny olana amin'ny fifamoivoizana sy ny fiantsonan'ny fiara.
Fonosana & Loading:4 Units ho an'ny 1 * 20GP;10 Units ho an'ny 1 * 40HQ.
EEC L6e Electric Cabin Car-J4 dia modely vaovao novolavolain'ny Yunlong Company.Tena mety amin'ny be taona ny mandeha.Izy io dia azo antoka sy mahazo aina, manana traikefa tsara amin'ny fiara, tsy misy loto, ary azo ampiasaina eny an-dalana tsy misy fahazoan-dàlana, izay mety amin'ny dia.
Fametrahana:Ho an'ny fiarakodia fohy sy ny fitetezam-paritra isan'andro, dia manolotra anao safidy fitaterana mora mihetsiketsika izay afaka mivezivezy, manamora ny fiainanao andavanandro.
Fametrahana: Manolora fomba maitso sy eco hivezivezena.Fiara eco ho an'ny fitetezam-paritra isan'andro, mitondra fiara lavitra, manao dia mankany amin'ny fivarotana sy serivisy eo an-toerana, tsara ho an'ny manodidina ny tanàna.
toerany:Ho an'ny fiara mandeha lavitra sy mandeha isan'andro.Izy io dia manolotra anao safidy fitateram-pitaterana miovaova izay afaka mivezivezy, manamora ny fiainanao andavanandro.
Positioning: Vahaolana tsara ho an'ny lozisialy sy fitsinjarana entana sy fitaterana entana.Fanaterana kilaometatra farany sy vahaolana lozisialy.
Fametrahana: Vahaolana tsara indrindra ho an'ny fanaterana sakafo sy lozisialy rojo mangatsiaka & fitaterana any an-tanàn-dehibe, mora mifindra any afovoan-tanàna.
toerany:Ho an'ny fiarakodia fohy sy ny fitetezam-paritra isan'andro. Izy io dia manolotra anao safidy fitaterana mora mihetsika izay afaka mivezivezy, manamora ny fiainanao andavanandro.